Voahosotra ambony nisintona Down Faucets an-dakozia nikelikely
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets ao an-dakozia / WOWOW Top Nisafidy Faucets ao an-dakozia noka borosy Nickel
Nanaporofo nikelin-drongony ny poti-bolongana tampoka teo ambony
Ity horonana mitazona an-dakozia ity dia manana ireto manaraka ireto:
Mifanaraka mora amin'ny fatana an-dakozia, rano telo misy, mihodina eo anelanelan'ny flushes ary manamafy ny paompy rano, ary tsy voafetra ny toerana fanadiovana.
Ny electroplating amin'ny ambaratonga 10, mateza ary ny famoronana, ny serivisy valves seramika avo lenta, dia ny lakilen'ny rano amin'ny rano. Manomboha moramora, sasao tànana sy legioma raha tsy mangotraka.
2310101 torolàlana fametrahana
Ny kirihitra WOWOW dia manala fantsona 2310101 dia mahazo tombony betsaka raha oharina amin'ny mpivarotra hafa: grcet-dakozia misy zavatra ambony indrindra: coating coished (brrome chrome), marefo vita amin'ny vy, mora manasa; Ny singa amin'io fototra io: varahina manadio avo lenta sy voanjo varahina avo lenta, mahery, tsy misy firaka, miaro ny loto.
Prima layout & hitahiry rano: faucet milentika an-dakozia lehibe manindry manampy ny bokotra fijanonana an-dakozia, afaka misoroka ny rano amin'ny fotoana rehetra. (Vita amin'ny fitaovana ambony sy teknolojia manam-pahaizana ambony, aza manahy ny mitete)
Mpanampy an-dakozia lehibe: mpangaro lakozia-mpitaingin-tsofina amin'ny famonosana fantsom-baravarankely: 1.5m fipoahana-porofon'ny fako dia manome habaka 85cm; Sotofotra mivezivezy: 360 °, tonga lafatra amin'ny mason-dresaka roa, tsotra azo atodinana avy amin'ny iray milentika ho any amin'ireto; afaka mifaly isaky ny zoro ao an-dakozia ianao! Ny fangaro mifangaro amin'ny tombo-tsofina / kapila matevina matevina dia mandefitra ny fifandonana avo amin'ny alàlan'ny fitantanana mari-pana.
Mixer Tap Faucet Kitchen, rano mafana sy mangatsiaka: cartridge vita amin'ny ceramic vita amin'ny insiny, manome fanaraha-maso miadana sy mazava ny fivezivezena sy ny hafanan'ny rano. ; Foamer azo esorina, tsotra diovina na soloina. Ny faucet mixer dia azo ekena ho an'ny rafitra avo lenta / Tsy mifanaraka amin'ny fomba fanerena ambany.
Fametahana haingam-pandeha haingana: miaraka amin'ny saina miakatra haingana, natao indrindra ho an'ny sehatra voafetra sy ny vao haingana, mora; mipetaka mihantona ary tsy mitaky ny fahavoazana intsony. 5 taona fiantohana ny vokatra.
SKU: 2310101 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets ao an-dakozia Tags: Nickel nopotehina, Single Hole, price
21.5 X 11.25 X 3 santimetatra
Voasily Nickel 101
Stainless vy / varahina / firaka zinc
Lavaka tokana na lava-telo
Afovoany, Havia, Havanana
WOWOW Top Rated Pull Down Sing paws Faucets Singl ...
WOWOW Kitchen Sink Mixer Tapaka Pull Out Spray Bru ...
WOWOW Matte Black Pull-Down Sprau Kitchen Faucet